Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västerbottens län / Bjurholm
Ku soo dhawaaw Bjurholm – Degmada Iswiidhan ugu yar iyo mida adiga kuugu fiican iyo reerkaada. Bjurholm waa hal ka mid ah todobo degmo oo isla wadashaqeeyo, halkaasi ee Umeå ka tahay degmada ugu weeyn.
1,364 kiilomitir oo laba jibaaran
Umeå 59 kiilomitir
Skellefteå 169 kiilomitir
Sundsvall 255 kiilomitir
In guri meeshaan laga helo waa iska sahal. Dad badan oo doorto in ee degaan Bjurholm waxbarasho ee ku jiraan ama waxeey ka shaqeeyaan mid ka mid ah degmooyinka dhaw.
Bjurholm gudaheed, degmada ayaa guriyaasha badankood kireeyso. Degmada waxeey heeysaa ku dhawaad 170 guri. Guri kireeyaasha gaarka ah waa yar yihiin.
Waa badanahay inteena ku hadasho luuqad dheeraad ah aan iswiidhish aheeyn. 32 jinsiyaad ayaan ku dhanahay Bjurholm. Luuqada-qaxootiga ugu weeyn waa af carabi, af tigrinya iyo af soomaali.
Bjurholm waxey heysataa dhowr kaniisad, oo ay ka mid tahay kaniisada iswiidhishka, Pingstkyrkan iyo EFS.
Halkaan waxaa ku yaalo dukaamo, maktabad, xafiiska shaqada, dukaanmo gacan-labaad, biibito, goob jimicsi, banki, urur waxbarasho, farmashiye iyo goob dabaal. Waxaan kaloo qabanaa markasta qaab mashruuc ah oo ku wajahan ishdex-galka iyo wadashaqeynta dhinacyada kale.
Bjurholm waxeey waqti-sugasho oo gaaban uu lee dahay dugsiga xanaanada si uu canugaada uu helo boos dhaqso.
Iskuulka-Castor waa dugsiga degmada ee 0-9, waxuuna ku yaala bartamaha Bjurholm asago oo dhow maktbad iyo goob dabaal.
SFI waxa uu deyrta dhexdeeda 2016 ka mid noqon doonaa Komvux, taasoo ka dhigeysa in aad meesha aad ku dhigan doonto heerka A ilaa D ka dibna luqada iswiidhishkaa aasaasigaa. Waxaan ka shaqeeyneynaa inaan bixin karno xitaa ingiriiska iyo xisaabta deyrta dhexdeeda. Qaabilaada qaxootiga waxa uu fadhiyaa isla meesha aad wax ku baraneeyso, taasoo ka dhigeyso inaad si fudud caawinaad uga heli karto Isku-dubaradiga qaxootiga ee degmada.
Qaabilaada qaxoontiga ee degmada.
Xarunta caafimaadka Bjurholm waxaa joogo dhakhtar iyo dhakhtar ilko.
Waa jirtaa fursad lagu helo turjumaan markii lala xariiro hey'addaha dowlada. Hada hey'addo badan ayaa hayo warbixin badan oo ku qoran luuqado badan.
Bjurholm iyo Umeå waxaa uu dhaxeeyso 60 kilomitir, baska waxuu qaataa ku dhawaad hal saac. Tabussen.nu waa bog loogu tala galay gaadiidka dadweeynaha ee Västerbotten. Goobta duulimaadka Umeå waxeey jirtaa ku dhawaad 6,5 maayl. Safarka dulimaadka uu dhaxeeyo Umeå iyo Stockholm waxuu qaataa hal saac.
Xafiiska degmada Bjurholm waa shaqo dhiibaha ugu weeyn, qeeybta gaarka ah waxaa ugu weeyn Nyåkers pepparkakor. Dad badan ayaa uu shaqo-tago Umeå. Waxaad fursad uu lee dahay in aad shaqo ka raadsato shaqo-dhiibo joogo gudaha degmada Vännäs iyo Umeå.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Bjurholm